Webinar: Ku dadaalida mahadnaqida xilliyada adag (Sebtember 30th, 2020) - Ururka Xarumaha Xarumaha Qorista Caalamiga ah
Date: Sebtember 30, 1: 30-2: 30pm EST
Soo bandhigayaasha: Lauren Fitzgerald iyo Shareen Grogan
IWCA Barnaamijka Ciyaaraha Mentor Taxanaha Webinar
Dhamaanteen waan ognahay inay kuwan yihiin waqtiyo adag xarumaha wax qorista iyo guud ahaan dadka. Laakiin sidoo kale waxaan u baahanahay inaan horay u socono. Sidee ayaynu taas u yeelnaa? Waxaan ku bilaabi doonnaa cilmi baaris ku saabsan mahadnaqa ka dibna waxaan ka sheekeyn doonnaa sheekooyinka ku saabsan (mararka qaarkood aad u yar) ilaha iyo hantida aan ku dhisi lahayn. Kaqeybgalayaashu waxay kuwada hadli doonaan qolalka goynta qeybta labaad ee saacada. Ujeeddadeennu waa inaan rajo siino oo aan dhisno bulshada.
Dhammaan xubnaha IWCA waa lagu soo dhaweynayaa inay ku biiraan, markaa fadlan si xor ah u martiqaad asxaabtaada. Kani waa kal-fadhi iyo tag; haddii aad ka qayb geli karto oo keliya qayb ka mid ah webinar, weli waa lagugu soo dhaweynayaa inaad naga soo biirto.
Fadlan la xiriir Molly Rentscher (mrentscher@pacific.edu) wixii macluumaad dheeraad ah.